ဆောင်းဦးရာသီလယ်ပွဲတော် - ဝီကီပီးဒီးယား
China, Korea, ဂျပန်နိုင်ငံ, မလေးရှားနိုင်ငံ, စင်ကာပူနိုင်ငံ, Cambodia, Vietnam, Indonesia, Thailand
Lua error in မော်ဂျူး:Calendar_date at line 130: attempt to compare nil with number.
ဆောင်းဦးရာသီလယ်ပွဲတော် (simplified Chinese: 中秋节; traditional Chinese: 中秋節) သည် အရှေ့အာရှနှင့် အရှေ့တောင်အာရှရှိ လူအများ ဆင်နွှဲကြသည့် ရိုးရာပွဲတော်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤပွဲတော်ကို "လပွဲတော်" သို့မဟုတ် "လကိတ်မုန့်ပွဲတော်" ဟု ခေါ်ကြသည်။ ဤပွဲတော်သည် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ပြီးပါက ဒုတိယမြောက်အရေးအကြီးဆုံး အားလပ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤပွဲတော်၏ သမိုင်းကြောင်းသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၃၀၀၀ ကာလက ဖြစ်သည်။ တရုတ်အင်ပါယာအုပ်ချုပ်သူများသည် သီးနှံများအထွက်တိုးစေရန်အတွက် လမင်းထံ ဆုတောင်းပသမှုများ ပြုလုပ်ရာမှ ဖြစ်လာသည်။
ပွဲတော်ကို တရုတ်ပြက္ခဒိန်၏ ၈ လပိုင်း ၁၅ ရက်နေ့ လပြည့်ရက် ညအခါတွင် ကျင်းပကြသည်။ ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်ဖြင့်ဆိုပါက စက်တင်ဘာလလယ်မှသည် အောက်တိုဘာလ အစောပိုင်းအချိန် ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့တွင် လသည် အတောက်ပဆုံးနှင့် အရွယ်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်ဟု တရုတ်တို့က ယုံကြည်ကြသည်။ ထိုအချိန်သည် ဆောင်းဦးရာသီအလယ်ကာလဖြစ်ပြီး သီးနှံများ ရိတ်သိမ်းချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်လျက်ရှိသည်။
အရွယ်အစားနှင့် ပုံပန်းသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးရှိသည့် မီးအိမ်များကို သယ်ဆောင်ခြင်း၊ ပြသထားခြင်းများဖြင့် အထိမ်းအမှတ်မီးအိမ်အဖြစ် ပြုလုပ်ကြသည်။ ထိုမီးရောင်သည် လူအများအား ကောင်းသောထမြောက်အောင်မြင်ခြင်းလမ်းကြောင်းဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးခြင်းနှင့်ကောင်းသော ကံကြမ္မာများကို ရရှိနိုင်သည်။ ပွဲတော်ကာလတွင် မြေပဲချိုများ၊ ကြက်ဥနှစ်များ၊ အသားများနှင့် ကြာစေ့နှစ်များပါဝင်သည့် မုန့်ချိုများကို စားကြသည်။
Moon Viewing Festival at YouTube at Sumiyoshi-taisha, Osaka, Japan
↑ "Moon Festival – The Chinese Mid Autumn Festival"၊ June 3, 2021။
↑ Roy၊ Christian (2005)။ Traditional Festivals: A Multicultural Encyclopedia, Volume 1။ ABC-CLIO။ pp. 282–286။ ISBN 978-1576070895။
↑ Yang၊ Fang။ "Mid-Autumn Festival and its traditions"။ "The festival, celebrated on the 15th day of the eighth month of the Chinese calendar, has no fixed date on the Western calendar, but the day always coincides withafull moon."
↑ "Mooncakes, lanterns and legends: Your guide to the Mid-Autumn Festival in Singapore"၊ AsiaOne၊ September 19, 2020။
↑ "Mid-Autumn Festival in Other Asian Countries"၊ www.travelchinaguide.com။
↑ "A Chinese Symbol of Reunion: Moon Cakes – China culture" (in en)၊ kaleidoscope.cultural-china.com။ 18 August 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on5May 2017။
↑ "Back to Basics: Baked Traditional Moon Cakes"၊ August 10, 2014။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆောင်းဦးရာသီလယ်ပွဲတော်&oldid=672203" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၂:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။